FSX kulabo kufuneka baqale
Umbono FSX kulabo kufuneka baqale
iinyanga 11 1 imini eyadlulayo #975 by DRCW
I-FSX yinkqubo yokufunda kwaye kungekhona nje indlela yokuba ngumqhubi wenene. Nabani na oye wajikeleza ibhloko uya kukuxelela
indlela ekukhathazeka ngayo xa wenza iiposiso kwaye kufuneka ulayishe kwakhona i-FSX uze uqale. Kakade into ayithandanga
kum (LOL) Oku kulandelayo isitatimenti sento endiyifunayo kwiminyaka kwaye ndiyathemba kuya kunceda ekwenzeni okokuqala okanye
ukubuyisela iFSX Deluxe okanye i-Gold Edition.
ICANDELO 1: AMAKHARWARE NABAKHULU
Ngaphambi kokufaka i-FSX isitshixo ekuphumeleleni kukuqinisekisa ukuba unesigqeba esihle nesigxina. Ungaqwalasela
ukuhlaziya i-PC yakho nge-addng i-RAM / i-disk drive ehlukeneyo njl njl. Nawuphi na ummeme okanye umdlali uza kukuxelela inkqubo ekhulayo
yenza yonke imohluko. I-FSX isebenza kakuhle kunye nenqununu ye-processor quad okanye i-4 ghz okanye ngaphezulu.
Abantu abaninzi banqabile iprojekti yabo Umzekelo 3.2 ghz ku-4ghz .. okanye 4ghz ku-4.5ghz. Ngoko kutheni benza oku? Ngenxa yokuba
I-FSX injalo, inxhomekeke kakhulu kwiprograms kwaye kuya kubakho abantu behlala bexhoma iifom zabo kwi-edge. Ba thandayo
qhayisa nge 200 fps kwi-intanethi. Ngaba oku kuthetha ukuba nawe unako? Hayi ... Naluphi na utshintsho olwenzayo kwinkqubo yakho
ngaphezulu kweefrektri zecandelo kukho izingozi ezingatshisa i-hardware yakho ngaphandle kokuba wazi into oyenzayo,
sebenze nento enayo kunye nento enokuyenza.
Ukwenza umshini wakho ugijime i-FSX ukuze ufumane ibhalansi elungileyo yeefayile zombini kunye nokusebenza injongo
fumana imifanekiso oyifunayo kunye nereyimi yefom ye-30 fps. Okona kubaluleke kakhulu ukuhamba kwe-stutter. NdineXMUMX yangundoqo ye-AMD
Iprojector isebenza kwi-3.5ghz kwaye ndayigqithisa ngaphezu kwe-3.7ghz kunye nokongeza umtshintshi owongezelelekileyo kwinqaba yam
eyilungiselelwe ukupholisa nokuvula umoya. Ukuba uthenge ikhompyutheni kumthengisi wakho wendawo, uya kufanisa
ukuguqula inqaba kunye nemininzi yemodeli ayinakwandiswa. Naliphi ikhomputha esebenzisa udonga wart wall ukunikezela iplagi
ukuya eludongeni kunokwenzeka ukuba yinkqubo engenakwandiswayo.
zibalulekile. Ukuba unomdla ngokumalunga ne-simming kwaye ufuna ukudibanisa i-software yesithathu ye-software (iindawo eziqhelekileyo, iindiza, amafu
njl.) udinga ubuncinane i-1TB. Ndincoma i-hard drive ye-2TB. Ndincoma kwakhona ukusebenzisa i-hard drive eyahlukileyo
i-hard drive enefestile efakwe kuyo.
Uya kufuna ukusebenzisa i-RAM ephezulu yokusebenza (DDR3 njl.) Ubuncinci obufunekayo yi-4 gig ye RAM kodwa
kufuneka uqwalasele i-8 gig ye-FSX kunye nenkqubo enokunyuka kwi-32 gig ye-RAM phantsi kwendlela.
Nanku apho ungasebenzisa i-$$$ eninzi. Kukho amakhadi aphehliweyo ngamanzi ajikeleza i-$ 1500 US. WOW andinako ukufikelela
oko! Ufuna idilesi yemifanekiso emihle enokugijima i-$ 150 US. Ndisebenzisa i-2 AMD Radeon R9 200 Series
Amakhadi egraphic esebenza kwi-Firewire. I-card ecacileyo ekhawulwayo iya kunceda ithathe umthwalo kwiprojekti yakho. Nazi
Amakhadi amaninzi apho, ngoko icebo lam elincomekileyo kukuphanda kwaye ufumane i-bang kangcono ibhokhwe yakho. Ukukhangela iifom ye-FSX iya kukunceda
ekwenzeni isigqibo esilungileyo okokuqala.
Kuye kwaba nemiba apho ukuhlaziywa kwabaqhubi be-Graphic Card kubangele iimpazamo ezibulalayo kwi-FSX. Ngaphambi kokuthenga umzobo
khadi ubone ukuba unokufumana nayiphi na imiba eyaziwayo kunye namakhadi abaqhubi okanye naziphi na izikhalazo ku-FSX. Ukuba awukho
ukuba unayo nayiphi na ingxaki ngekhadi lakho lemifanekiso elikhoyo kwaye wenze uhlaziyo lomqhubi kwaye ngokukhawuleza kukho iingxaki,
buyela kumqhubi wokugqibela oyifakile.
Ukugqithiswa, ukuKheleka, ukuKhusela Ufuna ukunikezelwa kwamandla okugqithiselwe kwi-hardware yakho. Oku kuya kukuvumela ukuba ungeze okanye
utshintshe i-hardware ngaphandle kokugqithisa ngamandla akho ukunikezelwa kwamandla. Ndinegunya le-1000 yamandla ngaphezu kokuphindwe kabini
kufuneka ukuba ndiqhube i-PC.
Uphando kunye nokulungiselela kwangaphambili kubalulekile ngaphambi kokufaka i-FSX.
Icandelo 2: Ukufaka kunye nokwandisa i-FSX
Kalokunje ukuba sifihlile izinto ezisisiseko kwixesha eliphambili, masifake iFSX. Qaphela ukuba esi sikhokelo sofakelo senzelwe
Iinguqulelo zeFSX Deluxe neGolide ezingenayo i-FSX umlambo osebenzisa ifomathi eyahlukileyo.
Ngoko ke umehluko phakathi kweDeluxe neGolide?
I-Deluxe version ayifikanga ngokukhawulezisa X kwaye yile nto. Ukuba unayo i-Deluxe version, uya kuthi
funeka ufake SP1 kwaye SP2. Ngomxholo weGolide uvele wongeze i-disc acceleration emva kokufaka i-disc 1 ne-2
inyathelo 1: Ngaphambi kokufaka i-disc 1 & 2 yenza ifolda kumaxwebhu akho ngokukhetha ifolda entsha / iqhosha lokunene kwaye
igama le fayile "FSX" uze uyihudule kwideskithophu yakho. Xa ufaka kwi-FSX disc 1 khetha ezinye iinketho uze udibanise
ifolda yeFSX kwidesktophu oyidala. Oku kuya kufundisa i-FSX ukufaka inkqubo kule folda kunokuba
Iifayile zeProgram (x86)
Xa zombini ii disc 1 & 2 zifakiwe iFSX iya kuqala ngokuzenzekelayo. Uya kwandula ukhuthazwe ukuba ufake ikhowudi yakho yokhiye
kwaye isebenze inkqubo. Emva kokusebenza musa ukufaka ukukhawuleza (iGold) okanye ufake iSSP1 okanyeSP2 (Deluxe)! Ukuqalisa okokuqala
I-FSX kwimoya yendiza yamahhala imizuzwana embalwa uze ushiye inkqubo.
inyathelo 2: Ngoku fakela ukukhawuleza (iGold) SP1 & SP2 (Deluxe). Ukuze i-Gold edition iqalise i-FSX kwaye kwakhona uya kuyenza
unokunyanzelwa ukuba ufake kwi-key yakho yemveliso yokukhawuleza ukuze usebenze. Uya kwandelwa ukuba uvumele iFSX
ukongeza iimpawu eziphambili zepakethe yokwandisa. Khetha Ewe. Phinda uqale i-FSX kwaye usebenzise imobo yendiza yamahhala
imizuzwana embalwa uze uphume kwenkqubo.
inyathelo 3( yeqa le nyathelo ukuba unayo idrayivu ye-1 kuphela) Ukuba unomzila ohlukeneyo unqwenela ukuzinikezela
I-FSX ngoku iya kuba yithuba lokuyikopisha nokuyifaka kuloo moya.
Masithi iifestile zifakwe kwiC drive: kwaye unayo i-drive D engenanto: ifakwe kwi-PC yakho. Khetha
Qala / ikhompyutha / iDrayivu:
Kopisha kwaye unamathisele ifolda yeFSX kwideskithophu yakho kwiDrayivu D: Le nqubo iya kuthatha malunga ne-5 ukuya kwi-10 imizuzu.
Emva kokuba ikopiwe uya kulufuna unqamlezo omtsha ukuze usebenzise i-FSX kwi desktop yakho. Okokuqala donsela inqamulelo yangoku
kwi-desktop yakho kwi-Recycle Bin. Yiya kwiDrayivu D kwaye uvula ifolda yeFSX. Skrolela phantsi kwi-FSX.EXE ifayile yesicelo,
nqakraza ngakwesokudla kwaye ukhethe "ukudala indlela emfutshane"uze uyihudule kwi desktop yakho. Oku kuya kukuvumela ukuba usebenzise i-FSX usebenzisa oko
indlela e mfutshane. ONce iphinde isebenze i-FSX kwimodi yendiza yamahhala ukuqinisekisa ukuba inkqubo izinzile. Ngoku ungasusa ifolda yeFSX
kwi desktop yakho. Uya kuqhuba u-FSX kwi-drive D: ukusuka kweli nqanaba phambili.
Inyathelo 4: Windows Vista, 7 kunye ne8 ukufaka i-UIAUTOMATIONCORE.DLL kwi-FSX.
Ifayile ye uiautomationcore.dll iyadingeka ukukhusela ukuphazamiseka kwedeskithophu eyaziwayo kwiFSX. Into ebaluleke kakhulu
Kufuneka ufake i-dll efanelekileyo ngenguqu yakho yeefestile. Ukufaka into engalunganga kunokubangela iingxaki ezininzi. Yiya e
injini yakho yokukhangela kwaye uthayiphe uiautomaioncore.dll yeVista / kwiifestile 7 / kwiifestile 8 / kwiifestile 8.1 ezize
OS onayo. Emva kokuba ufumana ingcaciso echanekileyo, yikhuphe kwi desktop yakho uze uyifake kwifolda yakho ephezulu yeFSX hayi
phi enye !!! Gcina ikopi yalo kwifolda yakho yefayili njengemva.
Inyathelo 5: Lungisa izicwangciso zakho kwi-FSX.
Qhawula i-FSX kwaye ushintshe ukusuka kwindiza yamahhala ukuya kwizicwangciso. Nanku apho ungatshintsha imifanekiso, amafu, isithuthi njl ... Ndingayifaka
ukunyathela inyathelo ngesinyathelo kodwa kunoko kukho iindidi zokufundisa ezinkulu kwi-youtube. Kule vidiyo kucetyiswa ukuba usebenzise ngaphandle
isreyithi yesilinganiso semilinganiselo kodwa ndifumene iingxaki ngamagqabi kunye nokuphambuka kwendiza ngoko ndincoma ukubeka isilinganiselo sesireyiti sakho seFSX
i-limiter kwi-fps ye-30 okanye isiqingatha sezinga lokuhlaziya i-video yakho. Ukuba izilingo zakho zihlaziya kwakhona i-70 uze ubeke isilinganiselo sakho sesreyimu
i-limiter kwi-35 fps.
inyathelo 6: Qulunqa i-FSX
Emva kokuba izicwangciso zakho zigqityiwe kwaye zivavanywa kwimodi yendiza yamahhala yeyona ndlela ifanelekileyo yefps kunye negraphic
Inkqubo inokukuhlangula uya kufuna ukuyigcina apho. Ngoku sifuna ukucwangcisa FSX.CFG ifayile. Ndabhala umgca kulo
iqonga kwi-FSX Jikelele ebizwa ngokuba yi "FSX Fixes & Tips" ku-cfg "Nceda khangela iCandelo 1 elijongene ne-3
utshintsho olufunekayo kwiFSX. Kukho izithuba ezininzi kunye namavidiyo ngaphandle apho kunye nezinye iimilo ezinokubheka. Qhubeka u sebenza
FSX kwaye uyivavanye emva kokuba wenze le mijelo. I-3 yokuqala endiyibhengezisileyo kwipostile inokusetyenziswa sonke ngexesha elilodwa kodwa nayiphi na i-tweak
ukwenza emva koko kufuneka kulandelwe ngokusebenzisa i-FSX ukubona indlela ekuchaphazela ngayo ukusebenza kwakho. Ukuba uyayithanda, yigcine. Khumbula
ibinzana elithi " Ukuba ayiphuli ... UNGAKHULU "
Sebenzisa ifayile ye fsx.cfg ukwenza nayiphi na ishintsho ishintsho ukusuka kweli nqaku kwaye kungekhona isethingi kwiprogram ye-FSX kuba iya
kubangele ezinye iinguqulelo ozenzileyo kwi-fsx.cfg ukubuyisela emuva kwi-default.
inyathelo 7: Ukongeza ii-Add-ons
Emva kokuba uvavanye kwaye uqhuba i-FSX kuzo zombini iindwendwe ezide kunye ezifutshane kunye namanyathelo angentla ayenziwe, uze uqale ukulayisha yakho
ongezelelweyo elinye ngexesha NGONYAKA YOKUVAVANYA NGAPHAMBI UKUFAKA ABANYE. Ngale ndlela ukuba ingxaki imele ivele.
Ndiza kubheja ukuba uyazi apho ukhangele khona! Enye into endiyifisa ukuyifumanisa yiinkqubo onokuzithenga ezaziwa
njengesoftware yeFSX. Bafanele ukuphucula ukusebenza. Yonke into endiyithethayo (kwimbono yam) Musa ukulahla
Uyabona kwi-thread elandelayo!